Alahady 15 Novambra 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
“ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO "
Ivom-bokatry ny SAMPATI
Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no tanterina amintsika izao. Razarasoa Josie (SIHOTSY Tabia) no nitarika ny fotoana. Razafiarisoa Tiana, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Rasoanarivo Koloina no nitari-bavaka sy nanao ny vakiteny ao amin’ny Testamenta Taloha. Rakotomavo Mirana sy Radimimanana Rivo Itokiana (FILOALA Milefitra) no nanohy ny vakiteny tao amin’ny Testamenta vaovao.
Ny Matio 20:29-34 no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.
Fotoana ivon’ny herinandrom-bokatrany SAMPATI androany alahady 15 novambra 2020. Mbola ny lohahevitra » Miandrandra famonjena ny mino » no banjinina amin’izao volana Novambra izao.
Novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 121:1-2” Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza y famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin’I Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.”.
Eks 15: 2 “Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy Izy; izao no Andriamanitrao, ka hankalaza Azy aho, dia Andriamanitry ny razako, ka hanandratra Azy aho.”
Nohiraina ny hira FFPM 194:1-4 “ Andriananahary o”. Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy.
Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra noho nahafahana midera sy misaotra an’Andriamanitra noho ny nahatrarana izao fotoana izao sy ny fitantanany ny ivom-bokatry SAMPATI.
FOTOANA HO AN'NY ANKIZY SY NY TANORA
Zoky Andrianarivo Jaosoa, Mpampianatra K2, no nitondra ny fotoana natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora.
Matio 24:44 “Koa miomana kosa hianareo; fa amin’izay ora tsy ampoizinareo no hihavian’ny Zanak’olona” no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy.
Nohazavaina ny andinin-tSoratra masina ary ny hafatra nakana lesona tamin’izany :
• Voavolavola sy voasedra tamin’ny tenin’Andriamanitra isika
• Aoka ho vonona lalandava isika, tsy ho rendremana
• Mankatoa an’I dada sy neny, zoky ary zandry
• Izay ao amin’ny kristy dia Mpandresy
• Aoka tsy ho resin’ny tampoka isika
Taorian’ny hafatra sy vavaka nataon’ny Zoky Andrianarivo Jaosoa dia nohiraina ny FFPM 190:1 “Ry Fanahy Mpanazava”.
Nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny ary namaky ny Testamenta Taloha, Rasoanarivo Koloina araka ny Perikopa androany tao amin’ny 2Mpa 19: 14-19.
Rakotomavo Mirana kosa no namaky ny Testamenta vaovao Matio 20: 29-34 ary Radimimanana Rivo Itokiana no namarana ny vakiteny Asa 3: 1-8.
Nohiraina ny hira FFPM 357: 3 “Ry mpanota! Henoy izao”
Razafiarisoa Tiana Mpitandrina no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Ny teny nangalàna ny hafatra dia avy ao amin’ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Matio 20:29-34
Ny tantar’ireo jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana no nanatsoahana ny hafatra nandritra ny toriteny.
• Ny olona mahay manararaotra ny fandalovan’I Jesoa Kristy dia olona mahay mangataka, mahazo famindram-po sy famelan-keloka.
Mahaiza manararaotra ny fandalovan’I Jesoa Kristy ao aminao. Mangataha famindram-po sy famelan- famelankeloka fa izy manana izay hiheverany ny momba antsika. Mandondona ao am-ponao Izy. Aza variana mangataka.
Misy anefa ny olana indrindray, fa ny mino ihany no mifanenjika sy manakana ny fandrosoana
• Ny olona dia mahafantatra sy mahalala ny fiainam-panahy
Rehefa hainao ny laharam-pahamehana ao aminao dia manaiky hiantrano ao aminao Jesoa.
• Matio 20:33 :”Tompoko ô, ny mba hampahiratana ny masonay”
Zavatra maro samihafa ny mifamahofaho eo amin’ny fiainantsika indraindray ka diso fangataka isika.
Rehefa mandray fitahiana sy valim-bavaka dia mahereza manaraka an’I Jesoa
. Ny hafatra amin’ity Alahady natokana an’ny SAMPATI ity androany :
• Rehefa mijoro dia tena mijoro tsy voelingelina
• Asa masina no niantsoan’iTompo anao
• Ny olona mandray fitahiana dia Jesoa no miantso
• Rehefa mandray ny valim-bavaka dia mandroso
Zavatra telo no tsy azo ijanonana :
• Aza mijanona amin’ny toerana nahombiazana
• Aza mijanona amin’ny toerana nahalavoana fa mitsangana, mijoro, mandehana
• Aza mijanona amin’ny toerana misy anao ankehitriny, fa mandehana, miroso lalina kokoa ara-panahy
VAVAKA FIFONANANA SY FAMELAN-KELOKA
Nohiraina ny FFPM 462:5 “Eny, Raiko! Mba valio”
Ny teny famelan-keloka notononina dia nalaina tao amin’ny » Isaia 62:11 :”Indro, Jehovah efa nanambara hatrany amin’ny faran’izao tontolo izao nanao hoe : Lazao amin’i Ziona zanakavavy. Indro, avy ny famonjena anao. Indro, ny valim-pitia hatolony dia ao aminy. Ary ny valin’asa homeny dia eo anoloany.”
Lioka 19:9 :”Ary hoy Jesosy taminy : Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak’Abrahama koa”.
Taorian’ny teny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 109:3, narahana ny fanekem-pinoana laharana fahatelo sy ny vavaka mangina.
Nisy ny feon-javamaneno fohy, novakiana ny raharam-piangonana taorian’ny tatitry ny sampana nataon’ny Razanajatovo Ravakiniony sy ny hira noredonin’ny SAMPATI.
Ny mpitantsoratra Rakotomanana Andry no nanao ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :
• Raharaha ivelany :
• Raharaha anatiny :
Nisy feon-javamaneno fohy taorian’ny vaovaom-piangonana
Hira nangatahan’ireo nanao voady sy raki-pisaorana : 2:1 – 753:1 – Misaotra anao zahay
Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 275:1-2 :”Raisonao ry Tomposoa”
Fitsofandrano ireo Mpiandraikitra ho amin’ny taom-panabeazana 2020-2021. Ireo mpanabe natolotra dia nosokajiana ho mpiandraikitra ao amin’ny fanabeazana zazavavy sy fanabeazana zazalahy.
Taorian’ny vavaka fangatahana nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izay nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.
• Nitarika ny fotoana: Razarasoa Josie (SIHOTSY Tabia)
• Nitari-bavaka sy namaky ny Teny Soratra Masina (TT) : Rasoanarivo Koloina
• Namaky Teny Soratra Masina (TV) : Rakotomavo Mirana sy Radimimanana Rivo Itokiana (FILOALA Milefitra)
• Nitory ny teny: Razafiarisoa Tiana, Mpitandrina
• Namaky ny raharaham-piangonana: Rakotomanana Andry
• Diakona tompon’anjara : vaomieran’ny vola
• Fafana : Arielle
• Fanamafisam-peo: Rabiazamaholy Hery Lanto
• Mpitendry orgue: Rajaofetra Philippe John
• Naka sary : Rakotondramboa Andry
• Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly